🥇 ▷ WhatsApp beta ee macruufka wuxuu ku darayaa Memo ✅
WhatsApp beta ee macruufka wuxuu ku darayaa Memo
Cusbooneysiinta ka socota WhatsApp beta ee macruufka Androidna waxay u leeyihiin heeso aan caadi ahayn. Xiddiga cusub ee maanta xiddigtu waa taas ku dar xusuus qor si aad ula sheekaysato, weji raaxo leh oo muuqaal ah kaasoo siin doona shakhsiyad dheeri ah wadahadalka.
Memo waa kaqeybgalida barnaamijka macruufka dhejisyo jilicsan oo gaar ah. Iyagoo adeegsanaya aqoonsi wajiga ah, waxay ogaan karaan dhaqdhaqaaqyadeena oo waxay ku qaban karaan kartoonkan xiisaha leh.
Memo in WhatsApp chat
Sheekadan cusub Waxaa loo heli karaa iPhone X, XR iyo XS oo leh iOS 13 rakibay oo laga heli doonaa isla qaybtaas inteeda kale ee emojis ah.
Laakiin marka hore, waa inaan sameynaa Memoji gaar ah. Si tan loo sameeyo, macruufka wuxuu soo bandhigayaa aalado loogu talagay oo loo isticmaali karo in lagu abuuro faahfaahinta ugu yar.
Markaa waxaan ku dhejin karnaa waraaqda warqadda leh aqoonsiga wajiga. Tikniyoolajiyadda ay suurto galisay macruufka moodooyinka ugu dambeeya waa suura gal Qabso tibaaxaha iyo dhaqdhaqaaqyada Memoji taas oo markaa aan ku soo diri karno WhatsApp.
Sheeko kale oo cusub oo la socota cusboonaysiinta beta ee ugu dambeysay ee WhatsApp ayaa toos uga socota Facebook. Summada weyn ee adeegga farriinta ayaa leh qaybta ugu hooseysa qaybta Eto’da oo ay ku taal calaamad oranaysa “WhatsApp ka Facebook” Button.
WhatsApp beta ee macruufka ayaa muddo dheer xirnaa iyo in yar oo adeegsadayaal ah ayaa la aqbalaa waqti ka waqti. Qoondada ayaa hadda buuxa, laakiin haddii aad xiisaynayso waad garan kartaa sida loo soo dejiyo WhatsApp beta ee loogu talagalay iPhone oo aad safka gasho.
Dhamaantood wararka aan soo aragnay ee ku saabsan beta ayaa laga heli doonaa nooca xiga ee WhatsApp gudaha App Store, sida ku xusan tirada 2.19.90.
taasi Xusuus-qor ayaa ka dhex muuqday WhatsApp beta ee macruufka waxayna siin doontaa shaqsiyad iyo saaxiibtinimo badan sheekada oo guud ahaanba qalalan oo caajis ah.